आजको आवश्यता : पर्यटनको विकास – ToplineKhabar
May 22, 2018 May 22, 2018 प्रदीप भट्ट0Comment
पर्यटन क्षेत्रको विकासले देसको अर्थतन्त्रमा ठुलो महत्व बोकेको हुन्छ । जुन ठाउँमा पर्यटनको विकास भएको हुन्छ । त्यो ठाउँ र देसको विकास एक हदसम्म निकै माथि पुगि सकेको हुन्छ । देश विकासको गति तिब्ररुपले अगाडि बढाउनु छ, भने त्यस देशको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासले नै विश्वका कयौं देशहरु आर्थिक रुपमा सवल छन । पर्यटन कुनै ठाउँमा मनोरञ्जन गर्नका लागि होस् वा त्यस क्षेत्रको अवलोकल गर्न, जुन कामले गएपनि पर्यटकलाई आवश्यक पर्ने सेवासुविधाहरुमा रकम खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । उसले गरेको खर्चले व्यवसायीको आर्थिक जिवनस्तरमा सुधार गर्नुका सार्थ देशको आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पु¥याउने गर्दछ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि उच्च केन्द्र विन्दुमा पुगाउनका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न जरुरी छ ।
नेपाल आफैमा असिम पर्यटन विकासको सम्भावना भएको देश हो । पर्यटनलाई आकर्षण गर्नका लागि प्रकृतिले नै विश्वको अग्लो सगरमाथा, थुप्रै हिम श्रङ्खलाहरु, नदीनाला, ताल तलैयाहरु, हिरीयाँ अग्ला पहाडका चुचुराहरु, तराईका समथर फाँटहरु प्रकृतिले निशुल्क उपाहार दिएको छ । प्राकृतिक रुपमा उपाहार दिएका स्रोतहरु कति छन् कति । त्यसमा पनि मौलिकता झल्काउनका लागि संस्कृतिलाई पनि प्रकृतिले संगै अग्गालेको छ । सुन्दर प्रकृतिसंगै रहेका धार्मिक स्थलहरु, मठ–मन्दिरहरु, विभिन्न सांस्कृतिक तथा बहुभाषिक परम्पराले गर्दा पर्यटकको मनै बहकाउने गर्दछ ।प्रकृति प्रद्धत्व र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पर्यटनको आकर्षण बढाउन सरकारका संबन्धित निकायको ध्यान जाने हो भने छोटो समयमा नै नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्छ ।
पछिल्लो समय युवा वेरोजगारीको संख्या निकै डर लाग्दो छ । दिनै पिच्छे विदेसीने युवाको लर्को त्रिभुवन विमान स्थलमा देख्छ सकिन्छ । यो युवा पलायनतालाई रोक्न सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न जरुरी छ । युवा नै राष्ट्र निमार्णका मेरुदण्ड भएकाले युवा पलायनतालाई रोक्नु आजको आवश्यता हो । यहिलेको आवश्यता पनि त्यही हो । युवा पलायनता रोक्नु । भलै कम्युनिष्ट सरकार आएको छ । श्रम बजार र श्रमीकहरुको बारेमा कानुन बनाएर समस्याको हल गर्छन या गर्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ । आम अपेक्षा पनि यहिँ हो की सरकारले युवा वेरोजगारी अन्त्य गर्दछ । विकास निमार्णमा तिव्र दिन्छ भन्ने नै हो । त्यसका लागि सबैभन्दा सजिलो र हाम्रो जस्तो स्वर्ग युक्त भुमिमा पर्यटन विकासको सम्भावना प्रचुर रहेकाले यस क्षेत्रको विकास गर्न बान्छनीय हुने छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानि लगाएर पर्यटकलाई सेवा सुविधा दिने हो भने हजारौैं युवा रोजगारीको बाटो खुल्छ ।नेपाली पर्यटन बजारमा बाहिय र आन्तरिक गरि पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सके अबको केहि बर्षमा नेपालको आर्थिक क्षेत्रको कायापलट हुने निश्चित देखिन्छ ।
अहिले पनि सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा संम्भावनाका झ्याल ठोका खुला हँुदा हुँदैपनि नेपालको पर्यटन विकासको गति लिन सकिरहेको छैन् । पर्यटन क्षेत्रको विकासको मुख्य केन्द्रमा नै सरकारी हस्तक्षेपले नेपाल भित्रीने पर्यटकहरुमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । सरकारी निकाय नै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा क्रियाशिल नदेखिदा पर्यटन विकासले गतिलिने देखिदैन् । यदि देशको साच्चिकै आर्थिक विकासमा परिवर्तन गर्नु छ भने पर्यटन विकासलाई अग्रपंन्तिमा अगाडि सार्नु जरुरी छ ।
पर्यटन विकासको मुख्य जिम्मेवार निकायले नै चुप लागेर बस्ने हो भने नीजी क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव देखिन्न । सरकारले नीजी क्षेत्रले पर्यटन विकासका लागि गरिरहेको कामलाई प्रोत्साहान गर्दै लगियो भने व्यवसायी पनि लाभावित हुन्छन । आर्थिक उन्नतिमा फड्ुको मार्न सकिन्छ । नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुलाई उचित सेवा सुविधा प्रदान गर्न नसक्नुले पर्यटकहरुको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दो अवस्थामा छ । जसले गर्दा पर्यटन व्यवसायीहरुको व्यवसाय पनि धरापमा पर्ने गरेको छ ।
नेपालमा पर्यटन विकासका लागि सरकार र नीजी व्यवसायीहरुको सहकार्य आवश्यक छ । नीजी क्षेत्रले पर्यटन विकासका लागि गरेका प्रयासहरुलाई सरकारले स्वागत गर्ने हो भने पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा एक हद सम्म विकास हुन सक्दछ । पर्यटन विकासका लागि नीति निमार्ण गर्ने निकायनै सुस्ताउन थाल्ने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ ? यस विषयमा सबै निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्दा जुन क्षेत्रमा आर्थिक विकास बढी रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई बढि प्रथमिकता दिनु पर्ने हो । तर, सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन् । जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सकेको छैन् ।
समग्र देशको अभिभावक भनेको सरकार हो । सरकारले नै विकास निमार्णमा अग्रसर्ता नदेखाए नीजी क्षेत्रको एक्लो प्रयासले मात्र समग्र देशको विकास हुन सक्दैन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो बनाउन र छोटो समयमै उत्कृष्ट बनाउन नीजी पर्यटन व्यवसायीहरु लाई प्रोत्साहन गर्न । पर्यटनका सम्भावना बोकेका तर भौतिक पुर्वाधार नपुगरेका क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न, प्राकृतिक विपतबाट हने जोखिमलाई कम गर्न पूर्व सुचना केन्द्र स्थापना गर्न, पर्यटकहरुलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि व्यवसायीहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने, पर्यटकको सुरक्षा र उक्त स्थानको बारेमा सबै जानकारी प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई पर्यटकको ( पर्यटक धुमाउने मान्छे) गाइटको जिम्मा दिनाले अबको केहि बर्षमा पर्यटन सुधार आउने छ ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न भगौलिक हिसाबले विकट रहेका क्षेत्रहरुमा नीजी पर्यटन व्यवसायीहरुलाई बैङ्क कर्जा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाए नीजी क्षेत्रका व्यवसायी लाभावित हुन्छन । यसो गर्दा पहाडि क्षेत्रहरुमा नीजी पर्यटन व्यवसायीहरुको पनि संलग्नता बढ्छ । जसले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुगाउने गर्दछ । आर्थिक विकास भएका देशहरुमा शान्ति, सम्वृद्धि र अमनचयन कायम हुन्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न जरुरी छ ।
← सुनकाण्डका मुख्य नाईके गारे पक्राउ
फोरमले सभामुख पाउला ? →